ဆင်ခေါင်းပဲ ၁ ဗူး (အသင့်စားဗူး- ရေသွန် ပြီးရေစစ်ထားပါ)
Chickpeas 1 can (drained)
နေကြာဆီ ၁ ဇွန်း ခွဲ စားပွဲဇွန်း
Cook sunflower oil 1 ½ tablespoon
ကြက်သွန်နီ ၁ ဥ (နုတ်နုတ်လေးလှီးထားပါ)
Onion 1 no (finely chopped)
ကြက်သွန်ဖြူ ၂ တက် (နုတ်နုတ်စင်းထားပါ)
ငရုတ်သီးမှုန့် ၁/၂ ဇွန်း လက်ဖက်ဇွန်း
ခရမ်းချဉ်သီး ၃ လုံး (အစေ့ထုပ်ပြီး အတုံးလေးတွေ တုံးထားပါ)
Tomato3no (seeded chopped small size)
ပင်စိမ်း ၂ ပင် (အနေတော်ပိုင်းထားပါ)
Basil2stalks (chopped)
နနွင်းမှုန့် ၁/၂ ဇွန်း လက်ဖက်ဇွန်း
အားလူး ၂ လုံး (အခွံခွာပြီး အတုံးသေးလေးတွေ တုံးထားပါ)
Potato2no (peeled and diced)
အသီးအရွက်ပြုတ်ရည် ၁ ခွက်
အီတလီနံနံ ၅ ပင် (အနေတော်ပိုင်းထားပါ)
Fresh Parsley5sprigs (chopped)
၁။ အိုးအကြီးထဲ မီးအနေတော်ဖြင့် ဆီထည့်ပြီး အပူပေးပါ။ ဆီပူလျင် ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ နနွင်းမှုန့် ထည့်ပြီး ကြက်သွန် နွမ်းတည့်အထိတည်ပါ။ ငံပြာရည်၊ ငရုတ်သီးမှုန့်နဲ့ ခရမ်းချဉ်သီး များထည့်ပြီး အငွေ့တက်အောင် တည်ပါ။ မွှေပေးပါ ၊ ၅ မိနစ်လောက်တည်ပါ။
1.In large pan, heat oil over medium heat. Cook onion, garlic and turmeric until tender. Add paprika and tomatoes, simmer, stirring often, cook for5minutes.
၂။ အာလူး နဲ့ အသီးအရွက်ပြုတ်ရည် ထည့်ပါ၊ အိုးဖုံးပြီး ဆူအောင် ၅ မိနစ်လောက်တည်ပါ။ မကြာခဏမွှေပေးပါ။ ဆင်ခေါင်းပဲ ထည့်ပါ၊ မီးလျှော့ပါ၊ ၅ မိနစ်လောက် အငွေ့တက်လျင် (သို့) အာလူးနူးတယ့်အထိတည်ပါ။ ကျန်ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံး ထည့်ပြီး မွှေပေးပါ၊ ၁ မိနစ်လောက်ထပ်တည်ပါ။ စားမြည်းပါ လိုတာထပ်ဖြည့်ပါ။
2.Add potatoes and vegetable stock, cover and boil for5minutes, stirring occasionally. Add chickpea, reduce heat and simmer for5minutes or until potatoes are tender. Add remaining ingredients stir and cook for 1 minute. Taste and add anything needed.